Tsidika · Septambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Tsidika · Septambra, 2010
Tantara mikasika ny Tsidika tamin'ny Septambra, 2010
Nanokana ny grafitti lehibe indrindra eran-tany izay mihoatra ny 37 000 sqaure feet any amin'ny faritr'i Foz do Iguaçu ny Filohan'i Brezila Lula da Silva. Ity faritany ity; malaza amin'ilay riandranon'i Iguaçu sy ny sisintany telo iraisan'i Paraguay, Brezila sy Arzantina, dia hody amin'ireo lalambe migodàna voaravaka manome lanja ny zon'ny ankizy sy ny tanora.
Afrika: Mizara ireo fahatsiarovan-dry zareo ny fahazazany amin'ny aterineto ireo Afrikana
Afrika Mainty 10 Septambra 2010
Bilaogy iray ahitana andian-dahatsoratra nosoratan'ireo Afrikana manerana an'izao tontolo izao mikasika ny fahazazany ny That African Girl . Bilaogy iray mikasika ny fitomboana tao anatina fianakaviana Afrikana sy ny fianarana miaina ao anatina tontolo roa izy io . Efa nipetraka tany Afrika sy tany Andrefana ireo mpitoraka bilaogy izay mizara ireo fahatsiarovany ao .
Eoropa Afovoany & Atsinanana 02 Septambra 2010
Amerika Latina 01 Septambra 2010
Tonga indray ilay fotoana: vanim-potoanan'ny tafio-drivotra. Ka ireo mpitoraka blaogy any amin'ny faritra, voadona tamin'ireo tafio-drivotra mahery be taloha, dia manara-maso akaiky ny tafio-drivotra Earl, izay nosokajiana ho tafio-drivotra sokajy faha-3. Mandritra ireo 36 hatramin'ny 48 ora ho avy dia eritreretina handalo anyamin'ireo nosy Virjinia Amerikana sy Porto Rico izy, ankoatr'ireo nosy hafa.